‘संसद् विघटन गरेर देशलाई बर्बाद बनायो भन्नेहरु देशविरोधी हुन’ - NepalKhoj
‘संसद् विघटन गरेर देशलाई बर्बाद बनायो भन्नेहरु देशविरोधी हुन’
नेपालखोज २०७७ माघ ११ गते १४:५९
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर देशलाई बर्बाद बनायो भन्नेहरु देशविरोधी भएको आरोप लगाएका छन् ।
आइतबार काठमाडौंमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको समस्या र सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । “म पनि अलिअलि अपांगता भएको व्यक्ति हुँ । अर्काको किड्नीको सहारा लिनुपरेको छ,” ओलीले भने, “अपांगता कमबेसी होला ।
अपांगता होइनौं भन्ने ठूला व्यक्तिहरु मानसिकरुपमा झन् बढी अपांगता भएका व्यक्ति छन् । दुईवटा किड्नी फेरेको प्रधानमन्त्री विश्वमै छैनन् होला ।” उनले संसद् विघटन भयो भनेर कराउनेहरु लोकतन्त्र र देशविरोधी मान्छे भएको आरोप पनि लगाए ।
“अस्तव्यस्त भयो भने देशमा स्थायित्व हुन नदिने ?,” ओलीको भनाइ थियो, “बहुमतको सरकार तोडेर जोडजामको सरकार बनाउनुपर्छ रे । संसद् भनेको जालझेल हो ? पाँचैवर्ष जागिर खाने हो ? अरुको इशारामा काम गर्ने भएपछि यस्तै हुन्छ ।”